China LEDL200 LED Mobile Medical Examination Light miaraka amina mpamokatra sy mpamaky System Back Up System | Wanyu
LEDL200 LED Mobile Medical Examination Light miaraka amin'ny rafitra famerenana bateria azo averina
Ny andian-jiro fahazavana LED200 dia misy amin'ny fomba fametrahana telo, jiro fandinihana finday, hazavana fanadinana valindrihana ary jiro fanadinana mipetaka amin'ny rindrina.
LEDL200, ity anarana maodely ity dia manondro hazavana fandinihana finday.
Ny fitoeran-jiro amin'ity jiro fanadinana finday ity dia vita amin'ny fitaovana ABS.16 Ny takamoa OSRAM dia afaka manome hazavana hatrany amin'ny 50.000, mari-pana loko 4000K. Ny famonoana famonoana otrikaretina dia azo esorina.
■ Fikambanana fanampiana olona
Ny jiro fanadinana finday dia azo ampiasaina amin'ny fanadinana ENT (Maso, Orona, Tenda), nify, gynecological, dermatolojika, fitsaboana amin'ny tarehy ary fitsaboana amin'ny hopitaly.
Vokatry ny fiovan'ny toetr'andro, tafio-drivotra, horohoron-tany ary tsunami ary fipoahan'ny volkano dia ho tonga amin'ireo faritra tsy dia misy fotodrafitrasa firy ny fikambanana mpitsabo. Na any amin'ny faritra rotidrotiky ny ady, ny jiro fanadinana finday misy bateria dia tena ilaina tokoa.
1. Fototra miendrika H ergonomic
Fototra miendrika H, ​​milentika ny afovoan'ny hery misintona, ary ny hery isaky ny teboka dia milamina kokoa.
2. Rafitra miverina amin'ny bateria
Amin'ny faritra misy herinaratra tsy milamina, any an'ala, na any amin'ny faritra tsy fahampian'ny fotodrafitrasa, azonao atao ny misafidy jiro fandinihana finday miaraka amin'ny rafitra bateria. Ho an'ny bateria dia misafidy marika fanta-daza iraisam-pirenena izahay hiantohana ny fiarovana sy ny fitoniana amin'ny fampiasana.
3. Anti-vibration, Decompression, Casters Resistant
Misy mpilalao 4 efatra eo amin'ny fotony. Ny castors roa eo alohany dia iraisan'ny rehetra mihetsika ary ny ao aoriana kosa azo hidin-trano amin'ny freins.
4. Lohataona Premium
Nanamboatra endrika vaovao ho an'ny firafitra anatiny amin'ny sandry lohataona izahay. Rantsan-tànana iray monja dia azonao atao ny manamboatra ny hazavan'ny jiro, mampihena be ny havizanan'ny mpiasan'ny fitsaboana izany. Ankoatr'izay, mandritra ny dingan'ny fanitsiana dia tsy hilentika ny satrok'ilay jiro noho ny hery misintona misy azy, ny fametrahana azy dia marina ary tsy mihetsika.
5. takamoa OSRAM maharitra
Ho an'ity hazavana fanadinana finday ity dia misafidy takamoa OSRAM nafarana any Alemana izahay. Ny fiainam-panompoany dia mety hahatratra hatramin'ny 50 000 ora.
6. Tanana sterilizer azo esorina
Ny famonoana otrikaretina dia mora apetraka ary azo esorina amin'ny famonoana otrikaretina. Matetika izahay dia mampita hazavana amin'ny fizahana finday amin'ny tanany roa, ny iray ampiasaina isan'andro ary ny iray ho an'ny masirasira.
7. Butty matevina
Ny bokotra manjavozavo dia eo anilan'ny fitoeran-jiro, izay afaka manitsy ny famirapiratan'ny hazavana haingana sy mora. Famolavolana teboka telo, kilasika, fitomboan'ny hazavana, fihenan'ny hazavana. Ny hazavan'ny jiro fanadinana finday dia azo ovaina amin'ny ambaratonga folo.
Jiro fanadinana LEDL200 finday
Previous: LEDL110 LED Gooseneck Portable Exam Medical Exam Light amin'ny Wheels
Manaraka: LEDL260 CE nankatoavina karazana jiro fitiliana fandidiana fandidiana ho an'ny toeram-pitsaboana biby
LEDD500 / 700C + M valindrihana LED Double Dome Operatin ...